१३औं सागको नयाँ मिति तय गर्न मार्चमा बैठक, सेप्टेम्बर उता थेग्न सक्दैनाैंः जीवनराम (कुराकानी)
काठमाडौं १० माघ । दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)को नयाँ मिति तय गर्नका लागि आगामी मार्चमा दक्षिण एशियाली ओलम्पिक कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ ।
आगामी चैतका लागि यसअघि तय गरिएको १३ औं साग समयमै हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् राखेपले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाए पछि प्रतियोगिताको मिति तय गर्न बैठक बोलाउन लागिएको हो । नेपाल आयोजक राष्ट्र भए पनि उक्त बैठकका लागि सदस्य राष्ट्रको पनि सहमति चाहिने भएकाले बैठक मार्चमा मात्रै बस्ने तय भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पत्रबारे नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं साउथ एशियन ओलम्पिक काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने ‘राखेपको पत्र प्राप्त भएको छ, यस विषयमा छलफल गर्न आगामी मार्च २ मा साउथ एशियन ओलम्पिक काउन्सिलको बैठक थाइल्याण्डमा बस्ने छ ।
उक्त बैठकले दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग) को नयाँ मितिको टुङ्गो लगाउनेछ । ‘प्रतियोगिताको मिति घोषणा गर्न सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति चाहिन्छ, हामी बैठकमा यसबारे छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
मार्चको पहिलो साता बैंककमै एशियन ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारणसभा आयोजनासमेत हुँदैछ । सोही अनुकूलतालाई आधार मानेर साउथ एशियन ओलम्पिक काउन्सिलको बैठक राखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यसअघि साग प्रतियोगिता आगामी मार्च ९ देखि १८ सम्म नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो । तर समयमै तयारी पुरा नभएको कारण देखाउँदै राखेपले प्रतियोगिता कम्तीमा ६ महिना सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले समेत नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र लेख्दै मार्चका लागि निर्धारण गरेको मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै सेप्टेम्बरका लागि नयाँ मिति तोक्न पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यस विषयमा नेप्लेजले लिएकाे प्रतिकृयामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन् ।
सागको नयाँ मिति तय गर्न बैंककमा मार्चमा त्यहाँ साधारण सभा छ । त्यसै साधारण सभाको अवसर पारेर हामी बैठक गर्दैछौं ।
नेपालले कहिले प्रतियोगिता आयोजना गर्छ त ?
मार्चमा प्राविधिक कारणले प्रतियोतिा आयोजना गर्न सम्भब भएन भनेर सरकारले पत्र पठाएको छ । सेप्टेम्बरसम्ममा हामीले पूर्वाधार लगाएतका काम हामी सक्छौं र त्यसै अनुसार मिति तोक्नका लागि हामीलाई भनेको छ । त्यसैले हामीले सेप्टेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरि तयारी गरिरहेका छौं ।
हामीलाई समयमै प्रतियोगिता आयोजना गर्न के कुराले अप्ठेरो पर्यो ?
धेरै कुराहरु छन् । त्रिपुरेश्वरको रंगशाला बनिसकेको छैन् । पोखरामा पनि काम चल्दै छ । त्यसैले ठेकेदारले पनि सेप्टेम्बर अगाडि प्रतियोगिताका लागि सबै काम सक्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले बैठकमा हामीले सेप्टेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरि मिति तय गर्छौ ।
अहिलको मिति सर्यो भने नेपालमा प्रतियोगिता आयोजना हुँदैन भन्छन् ?
म आफै दक्षिण एशियाली ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भएको नाताले सेप्टेम्बरसम्मका लागि मिति सार्दा नेपालमै प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ । त्यसैले मैले सेप्टेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेको छु । उनीहरुले सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने कुराको विश्वासिलो आधार भने खोजेका छन् ।
त्यसभन्दा उता ?
सरकारले सेप्टेम्बरसम्ममा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरि तयारी गरिरहेको छ । त्यसभन्दा उताको कुरा अहिले नगरौं ।